ဂြာမနျတွင် "Geben" (Give မှ) Conjugate လုပ်နည်း
အဆိုပါဂျာမန်ကြိယာ geben "ပေးရန်" ကိုဆိုလိုသည်ကသငျသညျအတော်လေးမကြာခဏသုံးပါလိမ့်မယ်တဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ "ငါသည်ပေးခြင်းငါ" သို့မဟုတ်ပွောဆိုနိုင်ရန်အတွက် "ဟုသူမကပေးခဲ့တယ်" ဟုအဆိုပါကြိယာသင့်ရဲ့ဝါကျ၏တင်းမာနေကိုက်ညီ conjugated ရန်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦးအမြန်ဂျာမန်သင်ခန်းစာနှင့်အတူ, သင်ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အတိတ်ကာလတင်းမာနေသို့ geben conjugate ဖို့ဘယ်လိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်။
ယင်းကြိယာ Geben တစ်ခုနိဒါန်း
များစွာသောဂျာမန်ကြိယာသင် infinitive ပုံစံရန်သင့်လျော်သောအပြောင်းအလဲလုပ်ကူညီဘုံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာနေစဉ်, gebben စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်တစ်နည်းနည်းပိုပါတယ်။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးနှစ်ဦးစလုံးသောကြောင့်ထိုသို့မဆိုပုံစံများအတိုင်းလိုက်နာပါဘူး ကို stem-ပြောင်းလဲနေတဲ့ကြိယာများနှင့်တစ်ဦးမမှန် (Strong) ကြိယာ ။ ဒါဟာသင်ဂရုတစိုက်ယင်း၏ကြိယာပုံစံအားလုံးလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဆိုလိုသည်။
ကျောင်းအုပ်ကြီးအစိတ်အပိုင်းများ: geben (gibt) - gab - gegeben
အတိတ် participle: gegeben
ရအရေးကြီးသော (Commands): (du) Gib! (ihr) Gebt! Geben Sie!
အဆိုပါလက်ရှိတင်းမာနေအတွက် Geben (Präsens)
geben ၏ပစ္စုပ္ပန်တင်းမာနေ (präsens) အချိန်မရွေးသင် "ပေးခြင်း" ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအခုဖြစ်ပျက်ကြောင်းပြောချင်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဒါဟာကြိယာ၏အသုံးအများဆုံးအသုံးပြုမှုရဲ့, ဒါပေါ်မှာရွေ့လျားရှေ့မှာဤပုံစံများနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်အကောင်းဆုံးပါပဲ။
သင် "ဈ" ဟုအဆိုပါ du နှင့် er / Sie / es ပစ္စုပ္ပန်တင်းမာနေပုံစံများကိုရန် "e", ကနေအပြောင်းအလဲကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်အလွတ်ကျက်ရန်ဤစကားလုံးအနည်းငယ် trickier စေနိုငျသောပင်စည်အပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျ geben များ၏ပုံစံများကိုလေ့လာသင်ယူနေတဲ့အဖြစ်, အနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူသူတို့ကိုကျက်မှတ်စေဤကဲ့သို့သောစာကြောင်းများဖန်တီးပေးရန်ကြောင့်သုံးပါ။
Bitte gib Mir Das! - ငါ့ကိုကြောင်းပေးပါ။
Wir geben ihm Das Geld ။ - ကျနော်တို့သူ့ကိုပိုက်ဆံပေးကမ်းပါတယ်။
Geben (ဖြစ်ကြသည် / ရှိလည်းမရှိ) ကိုစကားထူး es gibt အတွက်အသုံးပြုသည်။
ich Gebe ငါ / ပေးခြင်းငါပေး
du gibst သငျသညျ / ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းပေးပါ
es gibt သူကပေးသည် / ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်
သူမပေးသည် / ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်
ကပေးသည် / ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်
es gibt ရှိ / ရှိနေကြသည်
wir geben ကျွန်တော် / ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းပေးပါ
ihr gebt သငျသညျ (ယောက်ျားတွေ) / ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းပေးပါ
Sie geben သူတို့ / ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းပေးပါ
Sie geben သငျသညျ / ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းပေးပါ
အဆိုပါရိုးရှင်းသောအတိတ်မှတင်းမာနေ (Imperfekt) တွင် Geben
အတိတ်တင်းမာနေ (vergangenheit) ခုနှစ်, geben အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများရှိပါတယ်။ သူတို့အားအနက်အသုံးအများဆုံးကတော့ရိုးရှင်းတဲ့အတိတ်တင်းမာနေ (imperfekt) ဖြစ်ပါသည်။ ဤ "ငါပေး၏" သို့မဟုတ်ပြောအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် "သင်အပ်ပေးတော်မူ၏။ "
Geben (ရှိခဲ့ / ရှိခဲ့ကြသည်) ကစကားထူး es gab အတွက်အသုံးပြုသည်။
ich gab ကျွန်တော်ပေးခဲ့ပြီး
du gabst အပ်ပေးသည်ကိုသင်တို့
es gab သူပေးခဲ့သည်
es gab ရှိခဲ့ / ရှိခဲ့ကြသည်
wir gaben ကျနော်တို့ကိုပေး၏
ihr gabt သငျသညျ (ယောက်ျားတွေ) ကိုပေး၏
Sie gaben သူတို့ပေးခဲ့တယ်
Sie gaben အပ်ပေးသည်ကိုသင်တို့
တင်းမာနေအတိတ်မှယင်းခြံဝင်းထဲမှာ Geben (Perfekt)
ဒါ့အပြင် (perfekt) ပစ္စုပ္ပန်စုံလင်သောအတိတ်တင်းမာနေကိုခေါ်ပါကသိရန်အသုံးဝင်သည်သော်လည်း, တင်းမာနေအတိတ်ဝင်း, အဖြစ်မကြာခဏရိုးရှင်းသောအတိတ်အဖြစ်အသုံးပြုမပေးပါ။
ပေးကမ်းခြင်း၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးအခါသင်အတိတ်ကာလ geben ၏ဤပုံစံကိုသုံးပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်စဉ်အခါအကြောင်းကိုတိကျတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ အခြို့သောအခင်းအကျင်းမှာ, ကိုလည်း ပြု. ဖြစ်ပေါ်ဆက်လက် "ပေးခြင်း" အဲဒီဆိုလိုဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ, "ကျွန်မအနှစ်များအတွက်ပရဟိတမှပေးပြီ။ "
ich habe gegeben ငါပေးပြီ / ပေးခဲ့တယ်
du ပြီ gegeben သငျသညျပေးပြီ / ပေးခဲ့တယ်
er ဦးထုပ် gegeben
Sie ဦးထုပ် gegeben
es ဦးထုပ် gegeben သူ / ပေးပြီပေးခဲ့တယ်
သူမ / ပေး၏ပေးပြီ
ပေးပြီ / ပေးခဲ့တယ်
es ဦးထုပ် gegeben ရှိခဲ့ / ရှိခဲ့ကြသည်
wir haben gegeben ကျနော်တို့ပေးပြီ / ပေးခဲ့တယ်
ihr habt gegeben သငျသညျ (ယောက်ျားတွေ) ပေးပြီ / ပေးခဲ့တယ်
Sie haben gegeben သူတို့ပေးပြီ / ပေးခဲ့တယ်
Sie haben gegeben သငျသညျပေးပြီ / ပေးခဲ့တယ်
တင်းမာနေအတိပြီးပြည့်စုံသော (Plusquamperfekt) တွင် Geben
အတိတ်စုံလင်သောတင်းမာနေ (plusquamperfekt) ကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာ, သင်အခြားအရာတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးနောက်အရေးယူဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းညွှန်ပြနေကြသည်။ ဒီဥပမာတစ်ခုက "လေဆင်နှာမောင်းမြို့မှတဆင့်သို့ရောက်လာသောပြီးနောက်ကျွန်မချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအားပေးပြီးမှခဲ့သည်။ " ဖြစ်နိုင်သည်
ich hatte gegeben ငါပေးသော
du hattest gegeben သငျသညျပေးထားခဲ့သည်
Sie hatte gegeben
es hatte gegeben သူပေးထားခဲ့
es hatte gegeben အဲဒီမှာခဲ့
wir hatten gegeben ကျနော်တို့ပေးထားခဲ့သည်
ihr hattet gegeben သငျသညျ (ယောက်ျားတွေ) ပေးထားခဲ့သော
Sie hatten gegeben သူတို့ပေးထားခဲ့သည်
Sie hatten gegeben သငျသညျပေးထားခဲ့သည်
အီတလီကြိယာ conjugation: Laurearsi
ပြင်သစ် Infinite: သည် L'infinitif
'' Buscar '' အသုံးပြုခြင်း
'' Mismo '' အသုံးပြုခြင်း
အင်္ဂလိပ် Grammar - အတိတ်အရန်ကြိယာ
"ငါသည်သင့်အ Love" ဟု: "Te Amo" သို့မဟုတ် "သဲ Quiero"?
'' pero 'နဲ့' တရုတ် '' များအတွက်အသုံးပြုခြင်း '' ဒါပေမဲ့ ''
အီတလီကြိယာ conjugation: Disegnare
ပြင်သစ် adjective (Adjectifs) နားလည်မှုနှင့်အသုံးပြုခြင်း
အားလုံး Dentils နှင့် Dentil မှိုအကြောင်း
အဆိုပါ Von Erich မိသားစု - အောင်မြင်မှုအဖွစျဆိုးသို့နှစ်မြောက်မွေးနေ့
ဘီယွန်းစ Knowles - နက္ခတ်ဗေဒင်ပုံတူ
USF GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
ဥရောပ Paleolithic Dogs ကို - ဥရောပကနေပြည်တွင်းခွေး?
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: ဗိုလ်ချုပ်ဂျော့ခ်ျ Sykes
အဘယ်သူသည် '' Archer '' အပေါ်အဘယ်အရာ Voice ကိုပါသလား
သောမတ်စ် Hancock ဟာ: elasticity ၏တီထွင်သူ
'' The Little Match မိန်းကလေး '(သို့မဟုတ်' Little က Matchstick မိန်းကလေး ') - က Short Story
နေကြာ - အမေရိကန်ပြည်တွင်းသမိုင်း
လူမှုဗေဒမှ Related အဖြစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ယူနစ်
ငွေကြေးဖောင်းပွမှု PFDs ၏လိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ကောင်းကျိုးများ
အဆိုပါဒဏ္ဍာရီများနှင့်ဟို steroids အသုံးပြုမှု၏အန္တရာယ်
Decongestants များနှင့် Scuba ရေငုပ်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: တိုက် Yamato
စာအုပ်အနှစ်ချုပ် - မာဂရက်မစ်ချယ်၏ 'လေနှင့်အတူ Gone' '